मानव मस्तिष्करोगको उपचार गर्न सक्ने प्रविधियुक्त हेल्मेट बनाइयो | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more मानव मस्तिष्करोगको उपचार गर्न सक्ने प्रविधियुक्त हेल्मेट बनाइयो
बैशाख २५ गते, २०७७ - १५:३५
अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा रहेको एक स्टार्टअप कम्पनीले मानव मस्तिष्कका संकेतहरू पढ्न सक्ने प्रविधियुक्त हेल्मेट बनाएको छ ।
कर्नल नामक कम्पनीले हेल्मेट आकारको टोपीमा अट्ने दुई नयाँ प्रविधि बनाएको घोषणा गरेको हो । ती दुवै प्रविधिले मस्तिष्कको गतिविधि हेर्न र रेकर्ड गर्न सक्छन् ।
यी डिभाइसहरूको तस्वीर खिचेर सार्वजनिक गरिएको छैन । यिनीहरू मस्तिष्कको अध्ययन गर्ने इलेक्ट्रोइन्सेफालोग्राफी जस्ता भारीभरकम उपकरणभन्दा भिन्न छन् ।
म्याग्नेटोइन्सेफालोग्राफी मशिन जस्ता डिभाइसले एउट पूरा कोठा नै ओगट्छन् र रोगीको टाउको त्यसभित्र अड्काउनुपर्ने हुन्छ । तर कर्नलले बनाएका फ्लक्स र फ्लो नामक प्रविधिले प्रकाश र कम्प्युटर आल्गोरिदम उपयोग गरेर इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ऊर्जा र रक्तप्रवाहको मापन गर्न सक्छन् ।
यी डिभाइसहरूले सिजोफ्रेसनया जस्ता रोगको अध्ययनमा सहयोग गर्न सक्ने अनि पक्षघात भएका मानिसलाई सोचेको भरमा शब्द बनाउन सहयोग गर्ने आशा कम्पनीले लिएको छ ।
अनि फ्लक्स र फ्लोलाई स्नायुविज्ञानमा उपयोग गर्दा डिप्रेसन र मस्तिष्कलाई हानि गर्ने अन्य विकारको उपचारमा पनि उपयोग गर्न सकिने आशा गरिएको छ । /एजेन्सीबाट
बैशाख २५ गते, २०७७ - १५:३५ मा प्रकाशित
यसकारण सेक्सका लागि बिहानको समय उत्तम हुन्छ , यस्ता छन् फाइदा
तपाईलाई टाउको दुख्छ ? यस्तो गर्नुहोस् खानपान !
कतै तपाईंका छोराछोरी डिप्रेसनमा त छैनन् ? हेर्नुहोस् यस्ता छन् लक्षणहरू